အကြောင်း - မိုးလုံလေလုံဆက်သွယ်ရေး Cable ကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံအဆောက်အဦးအပြင် Optical Fiber Cable ကိုတွင်အာရုံစူးစိုက်
ကွမ်ကျိုး Comax တယ်လီကွန်မြူနီကေး Fiber Cable ကို CO ။, , LTD
isahigh-tech company group engaged in researching, ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်အခွင့်အရေးများနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်း.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကော်ပိုရေးရှင်း 6years ကျော်တဲ့ professional fiber optic cable ရဲ့ထုတ်လုပ်သူများနှင့် patch ကိုကြိုးဖြစ်ပါသည်, က ISO နှင့်အတူ, ul, CPR, ROSH, လက်လှမ်းမီမှုနှင့်အီးလက်မှတ်များ. ကျနော်တို့ OEM သို့မဟုတ်သင်တို့အဘို့ fiber optic cable ကိုမဆိုဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်း.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ: ဖိုက်ဘာကေဘယ်လ်ကြိုးများနှင့် optical fiber ကို passive အစိတ်အပိုင်းများ. ထုတ်ကုန်အားလုံးကျယ်ပြန့်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုကြသည်, လျှပ်စစ်အမှုန့်, ရထားလမ်းနှင့်အခြားဆက်သွယ်ရေးထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်ဦးစီးဌာန, ထိုကဲ့သို့သောအမရေိအဖြစ်နိုင်ငံအများအပြားနှင့်ခရိုင်တင်ပို့, ဥရောပ, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့တောင်အာရှ.
ကျနော်တို့ ISO9001-2000 ၏လက်မှတ်များရရှိထားပါပြီ, P ကို၏အသံလွှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် Network ကို Access ကို. R ကို. တရုတ်နိုင်ငံ, high-tech ကုမ္ပဏီကို, ယေဘုယျအားအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု၏အရည်အချင်းပြည့်မီသည့်ကုမ္ပဏီ.
လက်ရှိအချိန်မှာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည်6သန်း core ကို .km နှင့် 1.5 သန်းကိုအပိုင်းပိုင်း patch ကိုကြိုး.
ကွမ်ကျိုး Comax တယ်လီကွန်မြူနီကေး Fiber Cable ကို CO ။, , LTD . is one of the biggest manufacturer of fiber optic cable in China and has more than7years manufacturing and selling experience, providing superior professional fiber optic cables to worldwide customers.